So Wopɛ sɛ Wuhu Nokware No?
KENKAN WƆ Abbey Abua Acholi Afrikaans Ahanta Albanian Albanian Sign Language Altai American Sign Language Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Assamese Ateso Attié Australian Sign Language Austrian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bambara Baoule Bashkir Basque Bassa (Cameroon) Bassa (Liberia) Bengali Bicol Bislama Bissau Guinean Creole Bolivian Sign Language Boulou Bulgarian Bété Cakchiquel (Western) Cambodian Carib Catalan Cebuano Central Alaskan Yupik Chavacano Chichewa Chin (Hakha) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chopi Chuabo Chuukese Chuvash Cibemba Cinamwanga Cinyanja Colombian Sign Language Costa Rican Sign Language Croatian Czech Czech Sign Language Damara Dangme Danish Danish Sign Language Digor Diola Douala Drehu Dusun Dutch Dutch Sign Language Ecuadorian Sign Language Edo Efik Emberá (Catío) English Estonian Estonian Sign Language Ewe Fante Faroese Fataluku Fijian Filipino Sign Language Finnish Finnish Sign Language Fon Frafra French French Sign Language Fulfulde (Cameroon) Ga Galician Garifuna Georgian German Ghanaian Sign Language Gokana Greek Greek Sign Language Greenlandic Guadeloupean Creole Guarani Guarani (Bolivia) Guatemalan Sign Language Guianese Creole Gujarati Gun Guna Haitian Creole Hausa Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hmong (White) Honduras Sign Language Huastec (San Luis Potosi) Hungarian Hungarian Sign Language Hunsrik Ibinda Icelandic Igbo Iloko Inakeanon Indian Sign Language Indonesian Indonesian Sign Language Irish Isoko Italian Italian Sign Language Itsekiri Iu Mien Ivatan Japanese Japanese Sign Language Jiwaka Jula Kabardin-Cherkess Kabiye Kabyle Kadazan Kalanga (Botswana) Kalenjin Kamayo Kannada Kazakh Kazakh (Arabic) Kekchi Khana Khasi Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinaray-a Kinyarwanda Kipende Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kongo Konkani (Devanagari) Konkani (Roman) Korean Kosraean Kpelle Krio Kryashen Kuhane (Subiya) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kurdish Sorani Kwangali Kwanyama Kyangonde Lakota Lamba Laotian Latvian Latvian Sign Language Lhukonzo Lingala Lithuanian Lithuanian Sign Language Lomwe Low German Luganda Lugbara Lunda Luo Luvale Luxembourgish Macedonian Macua Madi Makasae Malagasy Malay Malayalam Malaysian Sign Language Maltese Mam Mambwe-Lungu Mangareva Mapudungun Marathi Marquesian (Hiva Oa) Marquesian (Nuku Hiva) Marshallese Mashi Mauritian Creole Maya Mayangna Mayo Mazahua Mazatec (Huautla) Mbukushu Melpa Mentawai Mexican Sign Language Miskito Mixe Mixtec (Guerrero) Mixtec (Huajuapan) Mizo Mongolian Moore Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Nama Navajo Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngabere Nias Nicaraguan Sign Language Nicobarese Niuean Norwegian Nyaneka Nyungwe Nzema Odia Oromo Ossetian Otetela Otomi (Mezquital Valley) Palauan Panamanian Sign Language Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Paraguayan Sign Language Pennsylvania German Persian Peruvian Sign Language Pidgin (West Africa) Polish Polish Sign Language Ponapean Portuguese Portuguese Sign Language Punjabi Punjabi (Shahmukhi) Páez Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quiche Quichua (Chibuleo) Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Quichua (Pastaza) Quichua (Tena) Rapa Nui Rarotongan Romanian Romanian Sign Language Romany (Macedonia) Romany (Northern Greece) Romany (Romania) Romany (Southern Greece) Rungus Runyankore Russian Rutoro Réunion Creole Samoan Sango Saramaccan Sarnami Scottish Gaelic Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Serer Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Seychelles Creole Shona Shuar Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovak Sign Language Slovenian Solomon Islands Pidgin Somali Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Swedish Sign Language Swiss German Sign Language Tagalog Tahitian Tajiki Talian Tamil Tandroy Tarahumara (Central) Tarascan Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Toba Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tshiluba Tshwa Tsonga Tswana Turkish Turkmen Turkmen (Cyrillic) Tuvaluan Tuvinian Twi Tzotzil Udmurt Uighur (Cyrillic) Ukrainian Umbundu Urdu Urhobo Uruund Uzbek Valencian Venda Venezuelan Sign Language Vezo Vietnamese Voru Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Welsh Wichi Wolaita Wolof Xhosa Yacouba Yakutsk Yapese Yoruba Zande Zapotec (Guevea) Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zimbabwe Sign Language Zulu
NOKWARE a ɛfa dɛn ho? Nokware a ɛfa nsɛmmisa a ɛho hia paa a adesamma abisa pɛn no ho. Ebia woabisa nsɛm a ɛtete sɛɛ bi pɛn:
So Onyankopɔn dwen yɛn ho ampa?
So akodi ne amanehunu to betwa da bi?
So anidaso bi wɔ hɔ ma awufo?
Mɛyɛ dɛn abɔ mpae ama Onyankopɔn atie?
Mɛyɛ dɛn anya anigye wɔ asetena mu?
Ɛhefa na wobɛhwehwɛ saa nsɛmmisa yi ho mmuae afi? Sɛ wokɔ nhomakorabea anaa baabi a wɔtɔn nhoma a, wubehu nhoma pii a wɔakyerɛw a ɛkyerɛ sɛ ɛwɔ nsɛmmisa yi ho mmuae. Nanso mpɛn pii no, nhoma ahorow yi mu nsɛm nhyia. Ebi wɔ hɔ a, ɛte sɛ nea ɛso wɔ mfaso nnɛ, nanso ɛnkyɛ na emu nsɛm no atwam ma wɔayɛ mu nsakrae anaa wɔayɛ foforo.
Nanso nhoma bi wɔ hɔ a ɛwɔ nsɛmmisa yi ho mmuae a edi mũ. Ɛyɛ nhoma a emu nsɛm yɛ nokware. Yesu Kristo ka kyerɛɛ Onyankopɔn wɔ mpaebɔ mu sɛ: “W’asɛm yɛ nokware.” (Yohane 17:17) Ɛnnɛ, yenim sɛ saa Asɛm no ne Kyerɛw Kronkron no. Wɔ nkratafa a edidi so yi mu no, wubehu nsɛmmisa yi ho mmuae kakra a Bible de ma a ɛtɔ asom na ɛyɛ nokware.
NEA ENTI A WOBISA: Yɛte wiase bi a atirimɔdensɛm ne ntɛnkyea abu so wom mu. Ɔsom pii kyerɛkyerɛ sɛ Onyankopɔn pɛ nti na yɛrehu amane.
NEA BIBLE KYERƐKYERƐ: Ɛnyɛ Onyankopɔn na ɔma amumɔyɛsɛm kɔ so. Hiob 34:10 ka sɛ: “Ɛmpare nokware Nyankopɔn sɛ ɔbɛyɛ bɔne, ne ade nyinaa so Tumfoɔ sɛ ɔbɛyɛ nea ɛnteɛ!” Onyankopɔn wɔ biribi pa ma adesamma. Ɛno nti na Yesu kyerɛe sɛ yɛmmɔ mpae sɛ: “Yɛn Agya a wowɔ soro, . . . w’ahenni mmra. W’apɛde nyɛ hɔ wɔ asase so te sɛ ɔsoro.” (Mateo 6:9, 10) Onyankopɔn dwen yɛn ho araa ma enti, wayɛ nea obetumi biara sɛnea ɛbɛyɛ a n’atirimpɔw bɛba mu ɔkwan biara so.​—Yohane 3:16.
Afei nso hwɛ Genesis 1:26-28; Yakobo 1:13; ne 1 Petro 5:6, 7.
NEA ENTI A WOBISA: Wɔakɔ so akunkum nnipa pii wɔ akodi mu. Amane a nnipa hu no ka yɛn nyinaa.
NEA BIBLE KYERƐKYERƐ: Onyankopɔn aka bere a ɔbɛma asomdwoe aba asase so nyinaa ho asɛm. Wɔ ne soro Ahenni nniso ase no, nnipa ‘rensua akodi bio.’ Mmom no, “wɔde wɔn nkrante bɛyɛ nsɔw.” (Yesaia 2:4) Onyankopɔn beyi ntɛnkyea ne amanehunu nyinaa afi hɔ. Bible hyɛ bɔ sɛ: “[Onyankopɔn bɛpopa] wɔn aniwam nusu nyinaa, na owu nni hɔ bio, na awerɛhow ne osu ne yaw nso nni hɔ bio. Kan nneɛma [a ntɛnkyea ne amanehunu a ɛrekɔ so nnɛ ka ho] no atwam.”​—Adiyisɛm 21:3, 4.
Afei nso hwɛ Dwom 37:10, 11; 46:9; ne Mika 4:1-4.
NEA ENTI A WOBISA: Ɔsom ahorow a ɛwɔ wiase no kyerɛkyerɛ sɛ biribi hyɛ onipa mu a ɛkɔ so tena ase wɔ ne wu akyi. Ebinom kyerɛ sɛ awufo betumi ahaw ateasefo, anaa Onyankopɔn de abɔnefo to hellgya mu yɛ wɔn ayayade daa de twe wɔn aso.
NEA BIBLE KYERƐKYERƐ: Sɛ onipa wu a, na wawu. Ɔsɛnkafo 9:5 ka sɛ: “Awufo de, wonnim biribiara.” Esiane sɛ awufo nnim hwee, na wɔnte nka, anaa wonhu nea ɛrekɔ so biara nti, wontumi nhaw ateasefo anaa wontumi mmoa wɔn.​—Dwom 146:3, 4.
Afei nso hwɛ Genesis 3:19 ne Ɔsɛnkafo 9:6, 10.
NEA ENTI A WOBISA: Yɛpɛ sɛ yɛtena nkwa mu, na yɛpɛ sɛ yɛne yɛn adɔfo bom gye yɛn ani. Enti ɛnyɛ nwonwa sɛ yɛpɛ sɛ yɛsan hu yɛn adɔfo a wɔawuwu no.
NEA BIBLE KYERƐKYERƐ: Wobenyan nnipa pii a wɔawuwu no. Yesu hyɛɛ bɔ sɛ: ‘Wɔn a wɔwɔ nkae ada mu nyinaa befi adi.’ (Yohane 5:28, 29) Nnipa a wobenyan wɔn no benya hokwan atena paradise wɔ asase so sɛnea Onyankopɔn bɔɔ ne tirim mfiase no. (Luka 23:43) Nea ɛka bɔhyɛ yi ho ne sɛ, nnipa asoɔmmerɛwfo benya akwahosan pa na wɔatena ase daa. Bible ka sɛ: “Treneefo benya asase no adi, na wɔatena so daapem.”​—Dwom 37:29.
Afei nso hwɛ Hiob 14:14, 15; Luka 7:11-17; ne Asomafo Nnwuma 24:15.
NEA ENTI A WOBISA: Ɛrekame ayɛ sɛ ɔsom biara mu nnipa bɔ mpae. Nanso, pii te nka sɛ Onyankopɔn ntie wɔn mpaebɔ.
NEA BIBLE KYERƐKYERƐ: Yesu kyerɛɛ yɛn sɛ ɛnsɛ sɛ yetĩ nsɛm koro no ara mu ka wɔ yɛn mpaebɔ mu. Ɔkae sɛ: “Sɛ worebɔ mpae a, ntĩ nsɛm koro no ara mu nka no mpɛn pii.” (Mateo 6:7) Sɛ yɛpɛ sɛ Onyankopɔn tie yɛn mpaebɔ a, ɛsɛ sɛ yɛbɔ no wɔ ɔkwan a ɔpene so so. Sɛ yɛbɛyɛ saa a, ɛsɛ sɛ yesua Onyankopɔn apɛde ho ade, na yɛbɔ mpae ma ɛne no hyia. Bible kyerɛkyerɛ eyi mu wɔ 1 Yohane 5:14 sɛ: ‘Biribiara a yebisa sɛnea Onyankopɔn apɛde te no, otie yɛn.’
Afei nso hwɛ Dwom 65:2; Yohane 14:6, 14; ne 1 Yohane 3:22.
NEA ENTI A WOBISA: Nnipa pii gye di sɛ sika, edin a wobegye, anaa ahoɔfɛ betumi ama wɔanya anigye. Enti, ɛno ara na wodi akyi​—nanso wonnya anigye a wɔpɛ no.
NEA BIBLE KYERƐKYERƐ: Yesu ma yehuu nea ɛbɛma yɛanya anigye bere a ɔkae sɛ: “Anigye ne wɔn a wonim wɔn honhom mu ahiade.” (Mateo 5:3) Sɛ yedi nea ɛho hia paa​—Onyankopɔn ne nea wabɔ ne tirim sɛ ɔbɛyɛ ama yɛn​—ho dwuma nkutoo a, na yebetumi anya anigye ankasa. Nokware a ɛte saa wɔ Bible mu. Nokware a ɛte saa a yebehu no betumi aboa yɛn ma yɛahu nea ehia ankasa ne nea ɛho nhia. Sɛ yɛma Bible mu nokware boa yɛn wɔ yɛn gyinaesi ne yɛn nneyɛe mu a, ɛbɛma yɛanya asetena a edi mũ.​—Luka 11:28.
Afei nso hwɛ Mmebusɛm 3:5, 6, 13-18 ne 1 Timoteo 6:9, 10.
Eyi yɛ nsɛmmisa asia no ho mmuae kakra a Bible de ma. So wopɛ sɛ wunya nsɛmmisa yi ho mmuae pii? Sɛ woka wɔn a “wonim wɔn honhom mu ahiade” no ho a, akyinnye biara nni ho sɛ wobɛpɛ sɛ wunya ho mmuae. Ebia wubesusuw nsɛmmisa afoforo te sɛ nea edidi so yi ho: ‘Sɛ Onyankopɔn dwen yɛn ho a, dɛn nti na wama abɔnefosɛm ne amanehunu akɔ so bere tenten saa? Mɛyɛ dɛn ama m’abusua asetena atu mpɔn?’ Bible ma yɛn nsɛmmisa yi ne afoforo pii ho mmuae a ɛkɔ akyiri na ntease wom.
Nanso ɛnnɛ, nnipa pii mpɛ sɛ wɔhwehwɛ Bible no mu. Wobu Bible sɛ nhoma a emu nsɛm dɔɔso dodo a ɛtɔ bere bi a ɛyɛ den sɛ wɔbɛte ase. Wobɛpɛ sɛ obi boa wo ma wunya nsɛmmisa yi ho mmuae fi Bible mu? Yehowa Adansefo wɔ nneɛma abien a ebetumi aboa wo
Nea edi kan no, wɔayɛ Dɛn na Yebetumi Asua Afi Bible Mu? nhoma no sɛ ɛmmoa nkurɔfo a wonni wɔn ho adagyew ma wɔnhwehwɛ nsɛmmisa a ɛho hia yi ho mmuae a ɛtɔ asom wɔ Bible mu. Nea ɛto so abien ne Bible adesua a wɔne afoforo yɛ a wontua hwee no. Yehowa Dansefo bi betumi aba wo nkyɛn wɔ fie anaa baabi foforo a ɛfata, na nnawɔtwe biara ɔde bere kakra ne wo abesua Bible no a wuntua hwee. Nnipa pii a wɔwɔ wiase nyinaa anya nhyehyɛe yi so mfaso. Ama wɔn mu pii de anigye aka sɛ: “Mahu nokware no!”
Biribi foforo biara nni hɔ a ɛsen eyi. Bible mu nokware ma yɛde yɛn ho fi gyidihunu ne ehu ho, na ɛmma yɛn adwene ntu mfra. Ɛma yɛn anidaso, atirimpɔw, ne anigye wɔ asetenam. Yesu kae sɛ: “Mubehu nokware no, na nokware no bɛma moade mo ho.”​—Yohane 8:32.
Bible ka sɛ Onyankopɔn na ɔbɔɔ nneɛma nyinaa. Wohwɛ a ɔdwen yɛn ho?
Wopɛ sɛ Wuhu Nokware No?
Wowɔ Bible Nsɛmmisa? Wobɛnya Ho Mmuae a Ɛtɔ Asom Wɔ Ha!